Semalt Inotsanangura Chikonzero nei Mozenda Inofungidzirwa Kuti Ive Yechimwe Chezvinhu Zvakanakisisa Zvokushandisa Zvokushandisa
Dragraping data ndiyo nzira yekuunganidza mashoko kubva kune imwe nzvimbo kuti ironge zvigadziriswa mafomu akaita sa XML, CSV, kana TSV. Izvi zvinopesana nehuwandu hwemashoko sezvo chikwata chinowanzoitwa nekuunganidza data kubva kune dzimwe nzvimbo.
Chido che chekuchera dhiyabhorosi nhepfenyuro iri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwezvikomborero zvayo zvakawanda. Ndicho chikonzero mathuluzi mazhinji akagadzirwa kuti awane chero ruzivo kubva pawebhu - pauschalpreis rechnungen. Zvinosuruvarisa, zvizhinji zvezvigadzirwa hazvina kukwana uye zvine zvakawanda zvisingakundi. Zvisinei, kune chigadziro chinowedzera zvakanyanya, uye izvi ndizvo Mozenda.
Kubatsirwa kwekutsvaga deta
Mozenda inogona kuunganidza ruzivo rwemasangano emasangano nevamwe. Kunyorwa kwemashoko ekukurukura kunokosha kune vanotengeserana musangano uye vatengesi vesevisi pasi pose. Nekuvandudzwa kwe web scraping teknolojia, yava nyore kwazvo kutsvaga vanhu uye sangano kupa zvipatara nemishonga.
Kuwanikana nyore nyore kune mamwe mazano ekubatana kwakaita kuti zvive nyore kuunganidza mazita emahofisi, mazita ema email, uye kunyange kutumira mazita. Mukuwedzera kune zvakataurwa pamusoro apa, pane zvimwe zvikonzero zvekunyora mashoko nguva dzose:
1. Kutsvaga Kutsvaga: Makambani anotsanangura dambudziko rezvikonzero zvakasiyana-siyana. Semuenzaniso, makambani angave achida kuziva nhamba yemakwikwi avo vatipa mamwe maitiro nemashandi.
2. Geotargeting uye kugovera: Dhiyabhorosi inotsvaga kuti iwane zvinyorwa zvakanaka. Inobvumira makambani kuti atange nzvimbo-based based marketing campaign uye saka kuwedzere kubudirira kwezvavanoita zvekutengesa. Semuenzaniso, kambani inomhanya mu spain muStotton, Ohio inongotumira chete kutengesa mashoko kune vagari veSukuton. Kuvatumira kune vagari vomuCincinnati hazvizobudirire sezvo zvisingabviri kuti chero munhu upi zvake achaenda kure kure kuti atore nzvimbo dzepa spa.
3. Makambani ekutsvaga: Sezvambotaurwa kare, unoda kuwana ruzivo rwekuvaka dhesi yevanhu vanotarisirwa.
4. Kusika kwezvinongororwa: Somuenzaniso, kana kambani inoda kushandisa masangano emugweta, inofanirwa kutarisa mabhuku ezvemitemo kuti vawane mazita evamwe magweta anowanikwa muguta rimwe chete.
5. Kuongororwa kwevanhu nemasangano emabhizimisi: Kana uchitsvaga bhizimisi kana mubatsiri webasa, ruzivo rwemashoko runobatsira kambani kuongororesa vataridzana navo. Kana iwe uchigona kuwana ruzivo pamusoro pekambani kana mumwe munhu, iwe unogona kuzviongorora pasina.
Mozenda software inogona kubvisa data yaunoda nguva nenguva kana paunoda. Yakagadzirirwa kuita kuti vashandisi vadzidze unyanzvi hwekutsvaga webhuta nekukurumidza. Mozenda inoshandisa browser kushandura teknolojia inoita kuti iite somunhu chaiye anoshandisa.
Inogona nyore nyore kufamba nemazita emukati web
) Inotakura uye inofamba mapeji sezvinoita browser
Kunze kwekukwanisa kutevedzera vashandisi, Mozenda inotsigirwa nehukuru hwema 24/7 tech, uye purogiramu yacho inouya nemamwe mavhidhiyo madiki ekudzidzisa vashandisi kuti udzidze kushandisa sarudzo zvakanaka. Mifananidzo mafupi mavhidhiyo ndeokuti:
Maitiro ekutora mavara. Izvi zvinotora masekondi 43
Ungatakura sei peji rinotevera remigumisiro. Zvinotora miniti uye 58 seconds
Nzira yekugadzirisa chirongwa chekuita sei nguva dzose. Nguva yeiyi ndeyamaminiti uye masere masere
Nzira yekubatanidza sei data kubva kuminda mbiri. Zvinotora miniti imwe chete nemaminitsi 16
Mukugumisa, kunyange zvazvo Mozenda ine zvinhu zvakawanda, chikonzero chakakosha iwe unofanidza kuedza iyo ihwo kukwanisa kwayo kubvisa mawebsite ane simba.